आरोप बिचार लाग्न सुरु भइ सक्यो मण्डलामा आरोप किन र कसरि ?? - Glamorous Icon
२० भाद्र २०७३, सोमबार १६:१४
Home›GIcon News›आरोप बिचार लाग्न सुरु भइ सक्यो मण्डलामा आरोप किन र कसरि ??
रङ,पेन्टिङ र प्रेम। रङ एउटा माध्यम, पेन्टिङ एउटा उत्तर अनी प्रेम? प्रेम न प्रश्न हो, न उत्तर हो, प्रेम प्रश्न हो या उत्तर हो भन्नु दुबै आरोप हो।
प्रसङ्ग निर्देशकिय शब्द सापटी लिएरै सुरु गरौ ”एक निमेश जम्नु छ, पग्लनु छ, बग्नु छ” यही प्रसङग मन्चमा जोडौ त उत्सब नाम गरेका एकजना रङ-कर्मी छन जो रङ पगाल्छन, बगाउछन र जमाएर एउटा उत्तर दिन्छन दर्शकलाई त्यो पनि यस्तो उत्तर कि न त कथाले, न त दर्शकले त्यो उत्तरको न अपेक्षा गर्छन्, न प्रश्न नै।
रङमा चरित्र घोलेर समाज रङ्याउने पेशागत हतियर बोकेका कलाकारहरु एना,सन्दिप,परिक्षा,पिटर र सुरज एतिबेला मण्डला नाटकघरको प्रेक्षालयमा धमधम आरोप देखाउदै छन।
रङ र आगो उस्तै हुन। आगोसङग खेल्छु भन्ने उत्सब (सन्दिप) को चरित्रको कथा यती सुगन्धहीन सालीन छ कि लाग्छ कथाले उत्सबलाई रङको सुगन्ध सुघ्नै सिकाएन। कथानुसार मौसमी(परिक्षा) रङ्-प्रेमी या भनौ उत्सबकी प्रेमिका हुन।
मौसमी लुकिछिपी किताबमा पत्र आदनप्रदान गर्दै उत्सबसङग प्राचिनप्रेमप्रणालीमा प्रेम गर्न खप्पिस देखिन्छिन।
नाटककार असिम खनालले कथालाई घरभित्र थुनेर बाहिरबाट भोटे ताल्चा मारिदिएका छन कि घरभित्रको कथा नाघेर अमेरिका हिंडेका शरद(पिटर)अर्थात मौसमिको दाजुलाई लेखकले लावारीश बटुवा बनाइदिन्छन।
खैर, कथाको जो चुरो छ,सुवर्ण(सुरज) ले दर्शकलाई एकमघ्न बनाएर शुरु गर्छन् र कथा ३५ को स्पिडमा बगिरहदा मौसमी र उत्सबको प्राचिनप्रेमप्रणालीको बिचमा सौरभी(एना) अर्थात मौसमिकी बहिनिले तरुल रोपिदिन्छिन।
मन्चमा सौरभी पात्र बचिरहदा, बेला बेला सिमले जस्तो पाको दिमा गे भईदिन्छिन त बेला बेला कलिलो सखरखन्ड जस्तो मिठो। तर रङ र प्रेमको मामलामा मौसमी यती जिज्ञासु र जिद्दी छिन कि कथान्त्यमा उनै उमेर १३ की सौरभिले रोपेको जलन, प्रेम, इर्श्या,राप को तरुल आशह्य हुर्केर उत्सबमाथि जाइलाग्छिन, तत्काल प्रकाश काटिन्छ, जसबाट दर्शकले यो बुझ्दछन कि उत्सबमाथी आरोप लाग्यो।
आरोपपछी जब सौरभीले मौसमी र उत्सबबिचका प्राचिन प्रेम प्रणाली का प्रेमपत्रहरु छर्लङग बनाइदिन्छिन तब लाग्छ सौरभी भर्खर जन्मेकी बच्ची जस्तै निर्दोश छे। उदेश्यबिहिन चरित्रलाई नै निर्दोश भनिन्छ क्यार।
आरोप को कथा सामान्य लाग्ने खालको जटिल छ, साइकोलोजी त आजकाल दर्शक र एस्तै २ पैसे समिक्षकले चहिने भन्दा बढी बुझेर समस्यामा पारीदिन्छन। मन्च र प्रकाशको पाटो तारिफयोग्य छ, चारित्रिक दृष्‍टिकोणमा कथाले अम्बले चरित्र मागे पनि कलाकारहरु अब्बले भने छन।
बोल्न, लेख्न शब्द नै चाहिन्छ भन्ने नाट्य लेखक असीम खनाल र बिना शब्द लेखेर र बोलेर बुझाउन सकिन्छ भनी निर्देशनमा हात हालेका बिकाश जोशीलाई धेरै धेरै बधाईको आरोप।
“छक्का पञ्जा” चितवनमा हिट , नारायणगढमा सोमबार ...